Voka-pifidianana vonjimaika: mitarika Rajoelina na nidina aza ny vatony | NewsMada
Voka-pifidianana vonjimaika: mitarika Rajoelina na nidina aza ny vatony
Midina tsikelikely na mbola mitarika hatrany aza ny kandidà Rajoelina amin’ny voka-pifidianana vonjimaika, navoakan’ny Ceni, omaly hariva tamin’ny 7 ora sy 29 mn. Nahazo ny vato 39,34% ny mpanorina ny IEM. Mitana ny laharana faharoa ny kandidà Ravalomanana, amin’ny salanisa 35,97%. Tsy niova firy fa nijanona eo amin’ny 7,99% ary mety mbola hiakatra kosa ny kandidà Rajaonarimampianina.
Mbola mijanona eo amin’ny laharana fahefatra kosa ny kandidà ny pasitera Mailhol. Manana ny salanisa 1,33%. Manaraka azy ny kandidà Randriamampionona Joseph Martin, nahazo vato 1,20%. Tsy nisy fiovana firy, tahaka izany, koa ny laharan’ny kandidà Rafalimanana Ny Rado. Mbola eo amin’ny fahenina ny tenany ary manana vato 1,13%.
Tsy nampoizina ary miakatra tsikelikely…
Tsy nampoizina kosa ary miakatra tsikelikely na tsy heno sy tsy hita firy aza ny kandidà isany, Rasolofonjoa Haingo Andrianjakamalala, Radilofe Mamy Richard. Samy nahazo vato mihoatra ny 0, 90% avokoa izy ireo. Manampy azy ireo ny kandidà Tareba Randriamanantsoa, manana salanisa, 0,92% ary koa ny kandidà vehivavy, i Bezaza Eliana, nahazo 0,88%.